Kismaayo News » Jaahwareerka nahaysta, jahligaa u sabab ah!
Jaahwareerka nahaysta, jahligaa u sabab ah!
Kn:Haddaad damcdo tuulo ku taalla Soomaaliya inaad Iskool ay dhallaanka wax ku dhigtaan ama qol yar oo dumarka looga dhaliyo aad ka hirgaliso waa inaad ugu yaraan ogaysiisaa Dawladaha dariska ah iyo Dukaanka UN ka ugu furan Suuq gaynta Soomaaliya!!!
Ragga Soomaaliyeed ee la yiraahdo waa ”Siyaasiin” intay cid kasta oo aan shaqo kulahayn ka tala galiyaan ama ka dhagaystaan wixii laga yeeli lahaa Dalka Tuulooyinka loo kala xayn daabay shacabkana ka dhigaan mid aan hadlin ayay marka miidda laga dhamaysto ee la iska tuuro ku hadaaqaan Reer hebel , Gumaysi iyo Galbeed ayaa wax halaynaya.
Shicibka soomaaliyeed ma lahan Xildhibaano kuwa haatan xanbaarsan magaacaas ma jiro Mudane ama Marwo maanta oran karta dadkaan matalo waa ka war hayaa baahidoodana way iisheegeen waxaana u taaganhay xalinteeda , meel ay ku tirsan yihiin waxaa ka jirto Liiska UNDP oo mushaarkooda meel u saartay muraadna ka leh.
Wasiirada war iyo waraaqo ayay maraysaa shaqadooda marka laga reebo tan maaliyadda oo gurta Canshuur aan la iigu badalayn nabad galyo, Tacliin iyo wixii aan xaq ugu leeyahay dawlad markaan canshuur bixiye ahay , arimaha dibadda war wareeg ayaan ilaa haatan aragnaa , wax sooraarka cid hadal haysa ma muuqato , tacliinta iyo dhallaanka waxaan wali taaganahay adduunka waa inuu wax nala qabto ama na caawiyo sidii anagoo wax horay ugu dhiibanay.
War-faafintu warka ”Madaxda” Dawladda iyo raaciyayaasha moogi ma hayaan dhiiri galinta dhinac yada bulshada dhalintuba ha u badnaatee , dhank Diintana wadaad isu marinaya moogiye Buuniyaashii Soomaliyeed ee Cilmiga Islaamka kama soo Baxaan, waxtar keedu kama badna madax dhooftay iyo kuwa soo dagay iyo dananka muusikada iyo qaar kaloon dan noogu jirin.
Idaacadaha darsinada ah ee xamar ilaa xaafuun waran waxay kobcinayaan akhrin la’aanta jaahilnimo iyo muran afka laga shubo , intooda badana waxaa ku socdo tuubo dal kale ka imaanaysa oo doolaraad laga listo , marka qof kasta Raadiye FM ah dhagta saarto ee maalin iyo habayn lagu shubo sheekooyinka qalbiga aadanaha wax yeelleeya wuxuu qofku qabatimayaa wax yeellaynta oo wuxuu aaminayaa inay tahay qayb nolosha ka mid ah.
Markuu ilaahay Bilaabay soo dajinta Diinteenna Islaamka waxaa Suubanaha looga Bilaabay Akhri , lama oran Tuko , sadaqo iyo sako bixi , Soon iyo Salaad lama farin waxaa la faray inuu akhriyo waa jidka aqoonta ee looga xuub siibto jahliga iyo aqoon xumada , xiligii ka horeeyay Islaamka lama oran casrigii dhagax (sanam) caabudka , waayadii qabyaaladda , waxaa lagu suntay Casrigii Jaahiliga (aqoon la’aanta )
Waxaa maanta marag ma doonta ah in shicibka soomaaliyeed uu hayo cudurka Jahliga , dhawrka aan aqoonta bidnayna Af-qalaad unbay barteen iyo aragtiyo Odayaal jiritaanka Ilaahay muran galiyay Suubanahana Inkiray oo diiday Jidkiisii, inkastoo ay arag soomaali leeyihiin hadana dhaqankii suubanaa waa ka awaareeyeen oo waxay daba rucleeyeen Aflaton , Orosto iyo Roso.
Jaha-wareerka jira jahligaa u sabab ah , jaahilka aan aqoon yahanka moodnay ayaa jidkii na waydaariyay , Alloow jidkii Nabi na qaadsii aamiin.
W/Q Seynab Qorane